Golaha sare ee arrimaha Islaamka Itoobiya oo war-murtiyeed soo saaray. - Hargeele - Wararka Somali State
Golaha sare ee arrimaha Islaamka Itoobiya oo war-murtiyeed soo saaray.
December 17, 2019 162
Golaha sare ee arrimaha islaamka Itoobiya ayaa sheegay in ay kasoo dhalaalayaan doorka kaga aaddan Sugida Nabad galyada iyo Xasiloonida dalka iyo Balaadhinta isjacaylka iyo wada noolaanshaha Shacabka wadanka.
Golaha arrimaha islaamka dalka ayaa shirwaynahoodii 1aad ee caadiga ahaa isfahan iyo midmidno kudhamaystiray, iyadoo uu goluhu Warmurtiyeed kasoo saaray kulankoodan 3da maalmood Caasimada dalka ee Addis ababa uga socday.
Sidookale Golaha sare ee arrimaha islaamka itoobiya ayaa warmurtiyeedkooda kucadeeyey inuu Goluhu si kago’naansho leh uga shaqaynayo Hawlaha Nabadgalyada, wada noolaanshaha, isqadarinta iyo isjacaylka shacabka dalka.
Dhanka kale Golaha ayaa Sheegay in Maadaama aan wali ladhamaystirin hawlaha diyaargarowga doorashada hogaaminta joogtada ah ee Majliska, ay goluhu dheereeyeen Mudada kumeel gaadhka ah ee Golaha Hogaaminta Majliska.
Ugu dambayntiina, Golaha sare ee arrimaha islaamka itoobiya ayaa sheegay in ay wadaan dhaq dhaqaaqyo lagu saxayo Gol duleelada kajira Qaabdhismeed Majlisyada Heer federaal iyo heer deegaan islamarkaana dadaal loogu jiro Fulinta iyo hirgelinta Go’aanadii uu Goluhu Horay usoo saaray ee la islaqaatay in Majlisyada Heer Federaal iyo Heer deegaanba laga dhaqan galiyo.
Gudiga shaqo abuurka deegaanka oo kulan yeeshay.
10 rikoodh oo ay muhiim tahay inaad ogaato ka hor kulanka El Clásico ee kooxaha Barcelona iyo Real Madrid
Wafdi ka socda midowga Yurub oo Jigjiga soo gaadhey.